I-JIANGSU IMI MAYELANA
Eyasungulwa ngonyaka ka-2013, i-Jiangsu IMI inesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-8 ekukhiqizeni nasekusabalaliseni amabhayisikili kagesi.
Inkampani ye-IMI ukwenza amabhayisikili kagesi asezingeni eliphakeme wokuhamba okwenzelwe wena. Ngokubambisana okujulile nobuchwepheshe obunqenqemeni, singakwazi ukuhambisa ibhayisikili likagesi lemfashini lakamuva emhlabeni jikelele. Siqinisekisa ukusimama kobuchwepheshe bethu obusha.
IMIKHIQIZO YETHU EBONAKALAYO
Sinikezela ngamabhayisikili kagesi anhlobonhlobo; njengebhayisikili yedolobha kagesi, ibhayisikili elisebenza ngogesi, ibhayisikili lomjaho kagesi, ibhayisikili yezimpahla zikagesi, ukusonga ibhayisikili likagesi kanye nebhayisikili lamafutha kagesi njll.
I-ECOLITE ebike yenzelwe ukuhamba ngebhayisikili okuhlelekile, okungenankinga futhi ifaka ikhwalithi kuyo yonke indawo.
Flat Road E-Ibhayisikili
I-EWAY (manje esizukulwaneni sayo sesithupha) ibhayisikili elihamba ngomgwaqo elisezingeni eliphezulu ebangeni lethu lamamodeli wamabhayisikili wedolobha akhiqizwayo.
UMUZI E-BHayisikili IMIKHIQIZO
Amabhayisikili kagesi akhulisa amandla akho okushova kanye namandla akho okwenza nokubona okuningi. Amabhayisikili e-vintage enza okuningi kwenzeke. Ayashesha futhi abushelelezi, anokuqagelwa, amandla alula ukulawula nebhethri elihlala isikhathi eside elikhishwayo eligcwalisa amandla kunoma iyiphi indawo esetshenziswayo.
48V Ukusonga E-Bike
Inejubane eliphezulu lamamayela ayi-12 ngehora, inesisindo esingamakhilogremu angama-20 futhi isebenza ngebhethri le-lithium phosphate elingakhokhiswa ngokuphelele emizuzwini engu-20. Imoto uhlobo olusha lwebhayisikili kagesi, elihlanganisa izinzuzo ezimbili zokugoqa ibhayisikili nebhayisikili kagesi.
36V Ukugoqwa E-Bike
Ibhayisikili eligoqiwe elihle likagesi elinamathani wezesekeli ezintsha, ithuthukisiwe i-350 watt motor, ibhethri elinamandla futhi elihlala isikhathi eside lama-48v 10.4ah, amabhuleki e-disc.
Ukugoqwa kwe-E-Bike IMIKHIQIZO
Kuhluma amabhayisikili kagesi emigwaqweni yasedolobheni, ezitimeleni nasemabhasini, nasezakhiweni zamahhovisi nasemaphasishi amafulethi ngesizathu esizwakalayo. Kunzima ukushaya ubulula bebhayisikili i-origamis phansi ukuze ilingane ngaphansi kwedeski lakho — kodwa futhi engenza ukuhamba kwakho kusheshe futhi kungakhokhisi intela. Ziyanda izinkampani ezixakekile ukudala umshini wokuhamba omncane wokugcina. Nakhu okufanele ukufune lapho ufuna ibhayisikili elihlanganisiwe lezinsuku zokuhamba eziningi noma ukugcina efulethini — futhi uhamba uhambo olude.
Ijubane le-E-Bike eli-7
Ibhayisikili kagesi i-ELECTO iyi-e-bhayisekili enamandla enokuma okuhle kozimele kagesi. I-e-bike kulula kakhulu ukuyisebenzisa.
Isivinini esingu-11 se-E-Bike
Nguwe olawula isibonisi se-Colour LCD esikuvumela ukuthi unqume ngezinga losizo oludingekayo, okwenza i-Roadstar ingalungeli ifulethi nje kuphela, kodwa futhi nezwe elinamagquma ngokwengeziwe.
Intaba E-ibhayisikili IMIKHIQIZO
Amabhayisikili asezintabeni kagesi ayikho konke osukuthande mayelana nokugibela umzila, kodwa okuningi kwakho. Ijubane elengeziwe. Amandla amaningi. Ibanga elingaphezulu. Indawo eningi. Kepha ojantshi bangaphezulu kakhulu kwalokho — yibhayisikili elisezintabeni elisebenza ngogesi elikunikeza ubudlelwano obuheha kakhulu nomkhondo. Amabhayisikili asiza ngogesi akhulisa amandla akho wokuhambisa ngenkathi ukhulisa inani lobumnandi ozoba nalo endleleni. Qhubeka phambili, hamba ngokushesha, futhi uhambe izindawo eziningi ku-e-MTB. Lawa ngamabhayisikili e-e akuvumela ukuba uthokozele kakhulu konke okwenza ukuhamba ngebhayisikili kwentaba kube kuhle.
Injini yehabhu yangemuva engama-350w ekwaziyo ukufaka leli bhayisikili lamasondo kagesi ngesivinini esifinyelela ku-30 ​​km / h kumandla kagesi ahlanzekile5-7hours wesikhathi sokushaja nokuklanywa okungangenisi manzi kwenza ibhayisikili lakho ligcine lilula.
Ibhayisikili elisha likagesi le-EFATI lenziwa ukunqoba zonke izinhlobo zamathafa, zombili zikhululekile emigwaqeni egandayiwe nasemgwaqweni.
Amafutha E-bike IMIKHIQIZO
Amathayi aphezulu anika amandla ukuqhuba izingcindezi zamathaya aphansi, futhi ingcindezi yamathaya aphansi imvamisa izala ukuhamba ngokunethezeka. Amathayi amabhayisikili anonile athatha lowo mqondo azeqise. Ngenkathi ungaqhuba i-60 + psi ngebhayisikili yomgwaqo, i-40 + psi ye-hybrid, ne-20 + psi ngebhayisikili lasentabeni, amabhayisikili amanoni akuvumela ukuba ugibele ngamapsi angama-5 kuye kwayi-10 kumasondo akho. Uzofuna ukwengeza ingcindezi yokuhamba ngamatshe futhi ususe umoya wokugibela ongekho emgwaqeni, kepha ukwehla okuphelele kwengcindezi yamathayi kuvumela amathayi ukuthi acindezele amaqhuqhuva, ekuhlelele ukuhamba.
26 INC E-Bike
Ibhayisikili lezimpahla zikagesi elihlome ngokuphelele, eline-fenders, amalambu ahlanganisiwe, itheku lokushaja le-USB, kanye neraki enkulu yangemuva eguquguqukayo.
I-E-Bike engu-20 intshi
Sakhele i-Escape ukuthi ibe yibhayisikili likagesi eliguquguqukayo ngempela. Ukuphunyuka kuyindawo ejwayelekile ezindaweni ezahlukahlukene, kusuka ekuhambeni okungaxakeki, emigwaqeni ye-monorail eya emgwaqweni kuya ekuzulazuleni komgwaqo phakathi kwewayini.
Cargo E-ibhayisikili IMIKHIQIZO
Amabhayisikili e-Freight ahlinzekelwe ngokuphelele ama-e-bikes anezinhloso eziningi anama-fender, amalambu ahlanganisiwe, amachweba okushaja i-USB nohlaka olukhulu lwangemuva olunezinhloso eziningi. Ifakwe uhlaka olusha lwe-aluminium alloy oludidiyelwe ngemisebenzi emisha olusha, izingane zokuxhasa, imithwalo, ukufakwa kwebhasikidi.